တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအားလက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
မတ် ၂၉၊ ၂၀၁၈ မေ ၃၀၊ ၂၀၂၀
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအားလက်ခံတွေ့ဆုံ
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Hong Liang အားယေန႔မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။
အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စုိးထြဋ္တက္ေရာက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီးႏွင့္အတူ သံ႐ုံးမွတာ၀န္ရွိ သူမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။
ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၊ ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာေဒသ အတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ထြက္ခြာသြားသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားအား ျမန္မာ-ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ လက္ခံႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ ကုလသမဂၢႏုိင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက မွန္မွန္ကန္ကန္ ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္တည္ေပးမႈအေျခအေနမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာမွ ေပးအပ္ေသာအကူအညီမ်ားအေပၚ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားေဒသခံမ်ားက ယုံၾကည္လက္ခံႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လုိအပ္သည့္အေျခအေနမ်ား၊ ARSA အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ထပ္မံ တုိက္ခုိက္မႈမျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား၊ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား ၫႇိႏႈိင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျဖစ္စဥ္ မွန္မ်ားအား ႏုိင္ငံတကာမွအမွန္အတုိင္းသိရွိေစေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာမွသံတမန္မ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ အဖြဲ႕မ်ားသြားေရာက္သတင္းရယူမႈႏွင့္ တခ်ိဳ႕မီဒီယာမ်ားမွမမွန္သတင္း မ်ားထုတ္လႊင့္လ်က္ရွိမႈအေျခအေနမ်ား၊ တပ္မေတာ္မွထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားအားရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာအျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ေတြ႕ဆုံပြဲအၿပီးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာတ႐ုတ္ႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Hong Liang က တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္အား အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္း ေပးအပ္ၿပီး စုေပါင္း ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ခဲ့ၾကသည္။
နေပြည်တော်၊ မတ် ၂၉
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hong Liang အားယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်တက်ရောက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ သံရုံးမှတာဝန်ရှိ သူများတက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ ဘူးသီးတောင်-မောင်တောဒေသ အတွင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံဘက်သို့ထွက်ခွာသွားသည့် ဘင်္ဂါလီများအား မြန်မာ-ဘင်္ဂလား ဒေ့ရှ်နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်များနှင့် အညီ လက်ခံနိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများ၊ ကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာတွင် တရုတ်နိုင်ငံက မှန်မှန်ကန်ကန် ပြတ်ပြတ်သားသား ရပ်တည်ပေးမှုအခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာမှ ပေးအပ်သောအကူအညီများအပေါ် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားဒေသခံများက ယုံကြည်လက်ခံနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်သည့်အခြေအနေများ၊ ARSA အစွန်းရောက်ဘင်္ဂါလီ အကြမ်းဖက်သမားများ ထပ်မံ တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားစေရေးအတွက် မြန်မာနှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား၊ နယ်ခြားစောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့များအကြား ညှိနှိုင်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဖြစ်စဉ် မှန်များအား နိုင်ငံတကာမှအမှန်အတိုင်းသိရှိစေရေးအတွက် နိုင်ငံတကာမှသံတမန်များနှင့် သတင်းမီဒီယာ အဖွဲ့များသွားရောက်သတင်းရယူမှုနှင့် တချို့မီဒီယာများမှမမှန်သတင်း များထုတ်လွှင့်လျက်ရှိမှုအခြေအနေများ၊ တပ်မတော်မှထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိအောင် ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများနှင့် မြန်မာ-တရုတ်နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများအားရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာအမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hong Liang က တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်အား အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်း ပေးအပ်ပြီး စုပေါင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်ထံသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် က ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်း သဝဏ်လွှာပေးပို့
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် သည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင်နောင်ရိပ်သာ၌ NCA-S EAO အဖွဲ့မှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ခိုင်စိုးနိုင်အောင် ဦးဆောင်သော ကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ပြည်မြို့၊ ဧရာဝတီမြစ် အနောက်ဘက်ကမ်းရှိ ရွှေဘုံသာမုနိစေတီတော်မြတ်ကြီးအား သွားရောက်ဖူးမြော်ကြည်ညို
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၉ Admin 0